जात्रामा जात्रा नहोस् – Palpa Samachar
By palpa samachar	 On Aug 14, 2019
मोफसलका जिल्लाहरु मध्ये पाल्पा सबैभन्दा बढी जात्रा संस्कृति मनाउने जिल्ला भित्र पर्छ । तानसेनमा औपचारिक रुपमा जात्राको समय सुरु भइसकेको छ । यद्यपी जनैपुर्णिमाको अर्को दिन गाईजात्राको दिनदेखि यहाँ जात्रा संस्कृति हरेक दिन जसो देख्न पाइन्छ । जात्रा मनाउने शैली, पछिल्लो समयको प्रविधिको सहजता, हराउँदो मौलिकता र जात्रा संस्कृति प्रति युवा पुस्ताको कम चासोका कारण जात्रा हेर्न आउने, जात्रासँगै रमाउनेहरुको संख्या भने ज्यादै न्युन हुँदै गएको छ । जात्रा संस्कृतिप्रतिको महत्व बढाउँदै यसको चहलपहल बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
अर्कोतर्फ जात्रा सुरु हुँनै लाग्दा यहाँ अर्को जात्रा पनि देख्न नपरोस् भन्नेमा तानसेनबासी छन् । तानसेनमा मोटरबाटो मर्मत, इको पार्क, दरबार गेट निर्माण लगायत धेरै निर्माण सम्वन्धी कामहरु भइरहेका छन् । पाल्पा दरबार संग्रहालय अगाडिको मुल गेटको काम नै गतिलो गरि भएको छैन । दरबार संग्रहालय उद्घाटनको दिन बिहान हतार हतार केही काम गरेको देखियो तर त्यसपछि निर्माण ब्यवसायी हराए । मसिनो खम्बाट पनि खोपेर गेट अड्याइएको छ । यो दृश्य ज्यादै लाजमर्दो भएको छ । यहाँका सिडिओ, एसपि, मेयर लगायतका बरिष्ठ मान्छे यो बाटो हिडिरहन्छन्, यो लाजमर्दो दृश्य पनि देखेका छन् तर अह उनीहरु यसबारे कही बोल्दैनन् । तर पर्यटनको कुरा मात्रै आउनुपर्छ मजाले भाषण ठोक्न भने पछि पर्दैनन् । दरबार परिसर उस्तै फोहोर छ । लथालिङग अवस्थामा ढुंगा मुढा राखिएका छन् । यी हटाउन महिनौ दिन लाग्छ । भएका रुख काटिएका छन् साना रुख रोप्न खोजिएको छ तर त्यो काम पनि प्रभावकारी छैन ।
सदरमुकामकै ट्राफिक ब्यवस्थापन सुन्य छ यहाँ एउटा ट्राफिकलाई नो पार्किङमा राखिएको सर्वसाधारणको एउटा मोटरसाइकलको टायरमा सिक्री बाधेर त्यही मोटरसाइकल र त्यही ब्यक्तिकै गोठालो गर्दै ठिक्क छ । तेर्सो सडकमै केही ब्यापारीले सडक नै आफ्नो जस्तो गरेका छन् । पार्किङ क्षेत्रमा पनि पार्किङ गर्न दिदैनन् तर प्रशासन बोल्दैन । यस्ता धेरै समस्या तानसेनका लागि सधै जात्रा नै भएका छन् ।
त्यतिमात्रै हैन शित्तलपाटी र मुलढोका क्षेत्रमा ढुंगा छाप्ने कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन । ढुंगा दरबार अगाडि राखिएको छ तर कामको गति उल्टै अल्छी छ । भएको पिच उप्काएर गर्न लागिएको ढुंगा छपाईप्रति धेरैले शंका ब्यक्त गरेका छन् । भएको राम्रै पिच भत्काइनु र ढुंगा छाप्ने कामले पनि गति नपाउनु दुखद विषय हो । यसमा निर्माण ब्यवसायी र नगरपालिकाको सिधै मिलेमतो देखिन्छ । नत्र नगरपालिकाले यसमा चासो किन दिदैन ? नारायणस्थान फुलबारीको काम उस्तै बिजोग छ । करोडौ खर्च भएको छ तर संरक्षण छैन । काम कति भयो र कति हुनुपर्ने हो कसैलाई चासो छैन । …यस्ता धेरै जात्रा छन् तानसेनमा ।
अव मौलिक संस्कृति सहितको भनिएको जात्रा हेर्न आउनेहरुलाई के भनेर बोलाउने ? उनीहरुले सामान्य विकास निर्माणमा समेत देखिएको यस्तो लाजमर्दो जात्रा देखेर भन्लान् ? यो सबै थाहा पाएर पनि मौन बस्ने सरोकारवालाहरु अव जाग्नैपर्छ । फेरि जात्रामा जात्रा देख्न नपरोस् ।
(वर्ष ९ अंक ८ पाल्पा समाचारपत्र साप्ताहिकको सम्पादकीय)